Fitsarana Saodiana: “Afaka Manao Izay Tiany Atao ny Mpanapaka”	Voadika ny 12 Novambra 2012 1:57 GMT
Zarao: Androany vao maraina no notontosaina ny fotoam-pitsarana fahadimy mikasika ny raharaha mahavoarohirohy ireo mpiaro ny zon'olombelona Mohammad Al-Qahtani sy Abdullah Al-Hamid. Nisisika ny mpitsara tamin'ny fotoam-pitsarana farany teo fa tsy azon'ny olona atrehina ny fotoana, saingy nolàvin'izy roa lahy mpikatroka ankitsirano izany. Niova hevitra araka izany ny mpitsara ka azon'ny daholobe atrehina indray ny fotoam-pitsarana saingy tsy maintsy ajanona ao ivelany ny finday. Olona teo amin'ny 45 teo no nanatrika ny fotoam-pitsarana mba hanohana an'ireo mpikatroka roa lahy, zatovo lahy avokoa ny ankamaroan'ireo tonga. Fanampin'izany, sambany tonga nanatrika ny fotoam-pitsarana ireo mpanao gazety nasionaly ao an-toerana. Ary, araka ny efa fantatra, polisy sivy no mitsangana isaky ny sisin'ny efitranom-pitsarana.
Tantaran'ny Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana farany 5 ora izayLibanonaFahaiza-mamorona Nentin'ny Libaney Nanohitra Ny Olan'ny Fako
1 andro izayLibanonaGV Face: Ny Zavatra Ilainao Fantarina Momba Ny Hetsi-panoherana Goavana “Maimbo Ianareo” Ao Libanona